Hevitr’ireo olom-pirenena : Mbola tokony hanohy ny asany ny Filoham-pirenena -
AccueilRaharaham-pirenenaHevitr’ireo olom-pirenena : Mbola tokony hanohy ny asany ny Filoham-pirenena
22/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Betsaka ireo olom-pirenena resy lahatra amin’ny fampandrosoana nentin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery teto amin’ny firenena tao anatin’izay efatra taona mahery nitondrany an’i Madagasikara izay, tamin’ny alalan’ny fametrahana sy fanamboarana ireo fotodrafitrasa fototra manerana ny Nosy. Araka ny hevitr’ireo olom-pirenena sendra anay tena an-dalana teny, dia mendrika ny hanohy ny asan’ny Filoham-pirenena ho fanohizana ireo zava-bita, satria mbola betsaka ireo fotodrafitrasa tokony hapetraky ny Filoha. Notsindrian’ireo olom-pirenena manokana ny fanamboarana ny lalana manerana ny Nosy, ny fananganana hopitaly, ny fanamboarana sekoly fa indrindra indrindra ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana. Raha mipetraka ny fandriam-pahalemana dia mandeha ho azy ny fampandrosoana hoy ny hevitr’ireo olom-pirenena ireo, rehefa nanontaniana omaly.
« Amiko efa betsaka ireny vita ireny fa mbola tsy ampy, ka noho izany mila manohy ny asany ny Filoham-pirenena satria mbola betsaka ny asa miandry azy. Tafiditra amin’izany ny fanamboarana lalana ahafahan’ny vokatra mivoaka sy ny olona mifamezivezy. Ny fanamboarana hopitaly manerana ny distrika, ny fanamboarana sekoly sy ny maro hafa », hoy i Benja, mponin’i Faravohitra. “Izaho mahita hoe, nanao zavatra ity Filoha ity ary hita mihitsy hoe te-hanao zavatra be izy entina hampandrosoana ny firenena. Mbola tokony hotohizana izany ny asany, ary mendrika hotohanana izy amin’ny vina napetrany hampandrosoana an’i Madagasikara”, hoy kosa indray ramatoa Jeanine, teny Analakely. “Manaiky ahy hoe betsaka ny fotodrafitrasa vita, ary mila tohanana mihitsy ny Filoha amin’ny fanatanterahana ireo asa. Fa ny mbola olana tena iainan’ny vahoaka ny tsy fandriam-pahalemana ka mila hamafisina. Satria na miaro tena aza ny mponina dia tsy mahatohitra ireo olon-dratsy”, io kosa indray no nolazain’i Andoniaina, teny 67ha.